Miisaaniyada EU ee hoowlgelinta dhallinyarada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Miisaaniyada EU ee hoowlgelinta dhallinyarada
La daabacay fredag 28 juni 2013 kl 15.27
Reinfeldt: Ma qabo iney wax ka badaleyso shaqa la'aanta dhallinyarada
Sawirle: Yves Logghe/Scanpix
Miisaaniyadda ururka Midowga Yurub ugu tala galay sidii wax looga qaban lahaa shaqa la'aanta ku habsatay dhallaanka ayaa ka badan middii la filayey, iyada oo miisaaniyaddaasi iminka gaartay 70 bilyan o okoronka iswiidhishka ah, sida xalay aey go'aan ku gaareen hogaamiyeyaasha ururka Eu-du.
Miisaaniyaddaa ayaa lagu taageeri doonaa carriga ey ku dhaqan yihiin dhalaan ey da'doodu ka hooseeyso 25 sano oo ku sugan shaqa-la'aan oo gaaraya 25%, aan lahayn tacliin ama heysan goob tababar shaqo. Iyada voo goolka laga leeyahay uu yahay in muddo afar bilood gudahood ah ey ku helaan labadaa xaaladood midood.
Dalka Iswiidhen ayaa saami u heley dhaqaale gaarsiisan 300 oo malyuun oo loogu talo galey goobaha ey dhallaankaasi ku badan yihiin oo ku yaala koonfurta, waqooyiga bartamaha Iswiidhen iyo bartamaha waqooyiga dalka.
Qaar ka mid ah madaxda waddammada ku bahoobay ururka Midowga Yurub ee uu ka mid yahay Fredrik Reinfeldt, madaxa dawladda ee dalkan Iswiidhen ayaa sheegey iney ka shaki-san yihiin in aanay miisaaniyaddaasi wax ka tari doonin sidii ay dhallin-yarada ugu abuuri lahayd goobo shaqo.